Fanoherana… famonoan-tena | NewsMada
Amin’izao fotoan-tsarotra diavin’ny firenena izao, mbola misy ihany ny manome vahana ny politika enti-miady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Tsy inona fa fanoherana bontolo amin’ny hevitra taingina sy petatoko. Na ahoana na ahoana, tsy mety amin’ny sasany avokoa izay atao sy mitranga rehetra? Nefa tsy manao na inona na inona izy ireo amin’izany, afa-tsy ny handrava efa amin’ny asa vava fa tsy vava asa: tsy tolo-kevitra manatsara zavatra tsinona fa fitaka sy famonoan-tena.
Ekena, malalaka ny fanehoan-kevitra ary natao hitsikera izay tsy mety ataon’ny mpitondra ho amin’ny tsaratsara sy ahombiazana kokoa ny hoe mpanohitra. Saingy, fanehoan-kevitra hahatsara zavatra sy hahasoa vahoaka no takina amin’izao fotoan-tsarotra izao fa tsy fanakorontanana sy fandravana. Mba inona, ohatra, ny tolo-kevitra ahombiazana amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19? Toy izany koa izay enti-ma­nam­py ny vahoaka ao anaty fahasahiranana.
Handresena ny fihanaky ny valanaretina ve, hono, izao ataon’ny mpitondra izao? Toy izany koa ny hoe fampijaliana na famoretana vahoaka ny mitranga sy atao. Mba marina? Eo ny tsirairay mahita, mandinika, mitsara. Fa handresena ny valanaretina ve ny fandravana gover­nemanta hampimenomenona ny sasany toy ny loha tapa­ka? Toy izany koa ny hoe: hampiadana ny vahoaka amin’ izao fahasahiranana izao ve ny fandravana governeman­ta? Fanakorontanana tsotra izao.
Hiady amin’ny adala? Mby amin’ny fitenenana hoe: “Izay mahalala, tsy miteny; izay miteny, tsy mahalala.” Izay teny tsy tsaroana? Na teniteny foana… Fanoherana bontolo… famonoan-tena: mbola azo henoin-teny sy inoan-teny ve ny hoe mpanohitra amin’ny toy izany? Na misy ilana azy akory… Ny tena no mila mijoro sy miroso amin’izay efa natomboka, mila faranana. “Aza misoka-bava raha tsy azonao antoka fa tsara no ho ny fanginana izay holazainao”, hoy ny ohabolana arabo izay.